FANDROSOANA ARA-TOEKARENA SY FAMORONANA ASA: Miara-miasa amin’ny tsy miankina ny Fanjakana hampiroboroboana ny sehatry ny indostria – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 1:22
Nitarika ny fitokanana ny asa fanitarana ny Orinasa Star ny Filoha.
Accueil/Politika/FANDROSOANA ARA-TOEKARENA SY FAMORONANA ASA: Miara-miasa amin’ny tsy miankina ny Fanjakana hampiroboroboana ny sehatry ny indostria
Miara-miasa hahatrarana ny fanatanterahana ireo Velirano fahafito, dia ny fampiroboroboana ny Indostria, sy ny velirano faha 11, “Madagasikara ho lasa maoderina”, ny Fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Izany no antoka hisian’ny famoronana asa sy ny fampandrosoana ara-toekarena, hoy ny Filoham-pirenena omaly, nandritra ny fitokanana ny asa fanitarana ny orinasa Star, tao Ambatolampy.
Lucien R. 4 décembre 2021
Endriky ny fanampian’ny sehatra tsy miankina amin’ny fanatanterahana ny velirano fahafiton’ny Filoha Andry Rajoelina ny ezaka ataon’ny orinasa Star amin’ny alalan’ny fanitarana ny orinasany tao Ambatolampy. Nisongadina izany nandritra ny fandraisam-pitenenan’ny Filoha Andry Rajoelina omaly. Raha ho an’ity orinasa tsy miankina ity manokana, nijoro teto Madagasikara nanomboka ny taona 1947 ny Star. Ankoatry ny famoronana asa hatrany amin’ny 15.000 ho an’ireo tantsaha mamokatra ny vokatra fanodina ho an’ny orinasa, voasokajy ho orinasa faharoa ho mandrotsaka hetra goavana amin’ny kitapom-bolam-panjakana ny orinasa Star. Tafiakatra hatrany amin’ny 255 miliara ariary isan-taona izany hetra izany. Tafiditra ao anatin’ny fanatanterahana ny fandaharanasan’ny Fanjakana « ODOF- One district one factory » na orinasa iray isaky ny distrika iray, araka izany, ny fanitarana ataon’ny orinasa Star. Antony nahatongavan’ny Filoham-pirenena nanatrika ny fitokanana ny orinasa araka izany ny fanehoana ny fahavononan’ny Fanjakana hanohana ny sehatry ny indostria izay manampy amin’ny fandrosoana ara-toekarena sady manampy amin’ny fanalefahana ny tsy fisian’ny asa.
Mampiakatra ny fahefa-mividin’ny vahoaka
Nitarika ny fitokanana omaly ny Filoha Andry Rajoelina. Nandritra ny fandraisam-pitenenany, nanamafy ny maha zava-dehibe ny fametrahana ny indostria amin’ny firenena ny Filoha mba hamokarana avokoa izay rehetra ilain’ny firenena eto an-toerana. Anisany nahitana taratra izany ny fiatraikany ny krizy ara-pahasalamana Covid-19 tamin’ny firenena manana indostria mamokatra izay ilainy ao aminy, sy ireo firenena izay tsy maintsy niankina tamin’ny fanafarana entana hatrany. Ankoatry ny famoronana asa, mampiakatra ny fahefa-mividin’ny vahoaka monina sy mivelona manodidina ilay indostria, mampiakatra ny harinkarena sy mampiroborobo ny toekarena ny indostria. « Ny tanjon’ny Fanjakana dia ny famoronana asa goavana » hoy ny Filoha. Antony hanohanany ny fandaharanasa ODOF mba hisian’ny fampandrosoana mipaka isam-paritra amin’ny alalan’ny indostria. Firenena maro toa an’i Chine, Inde sy Alemana ihany koa no efa naneho ny fahavononany hanampy an’i Madagsikara amin’ny fampiroboroboana ny indostria amin’ny alalan’ny ODOF, araka ny fanazavana.
Orinasa mpamokatra siramamy sy ny orinasa mpanamboatra simenitra
Ho fanatanterahana ny vina famokarana eto an-toerana izay rehetra ilain’ny firenena, nambaran’ny Filoha fa hapetraka mialohan’ny taona 2023 ireo orinasa roa goavana isany iankinan’ny ain’ny vahoaka. Isan’izany ny orinasa mpamokatra siramamy sy ny orinasa mpanamboatra simenitra. 11.000 taonina isan-taona ny siramamy ilain’ny orinasa Star izay tsy maintsy afarana, hoy ny fanazavana. Hanatrarana ny fahaleovantenan’i Madagasikara amin’ny famokarana ny siramamy ny orinasa roa hatsangana mialohan’ny taona 2023. Efa vita ny sonia fifanarahana amin’ny fametrahana ny orinasa mpamokatra siramamy. Etsy ankilany, vahaolana hahafahana mampihena be ny vidin’ny lasakan’ny simenitra ny fametrahana ny ozinina mpanamboatra simenitra. Araka ny nambaran’ny Filoha, homen’ny Fanjakana tombon-dahany ny Malagasy amin’ny fampiasam-bola amin’ny orinasa mpanamboatra ny simenitra. Takian’ny Fanjakana ho tsy maintsy Malagasy ny 50%-n‘ireo manana petra-bola na « action » eo anivon’ny orinasa. Natao izany mba hampanana hambompo ny mpandraharaha malagasy eto an-toerana na ireo diaspora any ivelany hirehareha ho manana anjara amin’ny orinasa goavana eto amin’ny firenena. Hanodidina ny 50.000 ka hatramin’ny 100.000 euros ny fampiasam-bola anjara amin’ny orinasa ka afaka 7 taona dia ho voaverina ny vola nampiasaina ao anatin’ny orinasa.
Mifandraika amin’izany indrindra dia nambaran’ny Filoha fa hisy ny fikaonandoha izay hiarahany amin’ireo mpisehatra amin’ny indostria ny 13 desambra 2021 izao ao anatin’ny lalantsainy ho fampiroboroboana ny sehatry ny indostria eto Madagsikara. Hifandinika miaraka ny « plan de l’industrialisation de Madagascar » amin’ireo mpisehatra ny Filoha. Ho faritana amin’izany ny sehatra tena ilaina fampiasana vola. Izany no natao dia ho fisintonana ny mpampiasa vola sy ho fandresen-dahatra azy ireo hampiasa vola eto Madagsikara ary hanangana ny orinasany eto, ary hojeren’ny Fanjakana manokana ny fanamorana ny lafiny ara-ketra.
FOTODRAFITRASA VAOVAO: Hampitombo ny taha-pamokaran’ny ozinina hatramin’ny 1900000hl
Hatramin’ny taona 2014 nahazoan’ny STAR ny ozinina Ambatolampy, dia ny famokarana labiera no nahafantarana sy nilofosan’ny ozinina. Ankehitriny dia nisy ny fanampiana milina famokarana miisa telo ahafahan’ny ozinina mamokatra amin’ny toerana iray ihany ireo labiera isan-karazany, ireo alcoomix, ireo zava-pisotro mamy misy gazy isan-tsirony ary ilay zava-pisotro vaovao D’JINO Ice Tea. Hampitombo ny taha-pamokaran’ny ozinina hatramin’ny 1900000hl (ireo zava-pisotro rehetra voalaza teo aloha) isan-taona ny fametrahana ireo milina vaovao ireo, izay entina hamaliana ny filàn’ny tsena anatiny. Mitohy amin’izay fanavaozana eo anivon’ny ozinina izay, dia nisy ny fanamboaran-dalana 2,8km nataon’ny STAR, miditra avy eo amin’ny lalam-pirenena fahafito mankany amin’ny ozinina entina hampirindra ny fifamoivoizan’ny mpampiasa lalana eny amin’ny faritry ny ozinina. Ny fitambaran’ireo fotodrafitrasa vaovao rehetra ireo dia hanampy sy hanamora ny fanatanterahan’ireo mpiasa miisa 220 eo anivon’ny ozinina ny asany isan’andro.
Lova nangalarina : Hiakatra fampanoavana eny amin’ny Pac ny raharaha
ZAVAKANTO SY ASA FANAOVAN-GAZETY: Notokanana ny Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina ao Fianarantsoa
TOROLALANA AMIN’NY FANANAN-TANY: Mpiray tanindrazana maro mitady fanampiana amin’ny Antoko Freedom
DISTRIKAN’I MAROANTSETRA : Lehilahy iray voarohirohy nanolana zaza 4 taona
FAMPANDROSOANA AN-TANAN-DEHIBE: Fotodrafitrasa maro efa mijoro ao Antsiranana, Fianarantsoa, Toliara